Omeo anarana ny mascot Hodges Hawk »Hodges University
Omeo anarana ilay Mascot The Hodges Hawk!
Tianay ny fanampianao!
Manana ny Hodges Hawk ho mascot anay izahay, saingy mila anarana ny Hawk antsika.
Ity fifaninanana ity dia misokatra ho an'ny mpampianatra ao amin'ny University of Hodges, ny mpiasa, ny mpianatra, ny alimia ary ny fiarahamonina ankapobeny. Alefaso ny mailakao amin'ny: Marketing@hodges.edu. Ampidiro ny anaranao sy ny anaranao, ny adiresy mailakao, ary ny anaranao iray ho an'ny Hawk.
Fitsipika sy fampahalalana ofisialy
TSY MISY Fividianana ilaina mba hidirana na handresy. NY Fividianana entana dia tsy mampitombo ny tombam-bidin'ny fandresena.
éligibilité: Ity fifaninanana ity dia tsy misokatra afa-tsy amin'ny mpampianatra ao amin'ny oniversite Hodges, mpiasa, mpianatra ary Alumni. Misokatra ho an'ny mponina ara-dalàna any Etazonia ihany ny fifaninanana, ary foana izany raha tsy voararan'ny lalàna. Ny fifaninanana dia iharan'ny lalàna sy lalàna federaly, fanjakana, ary eo an-toerana. Foanana raha voarara.
Fifanarahana amin'ny lalàna: Amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara, ny Contestant ("Ianao") dia manaiky hanaiky fatratra ireo fepetra ireo ary miantso sy manome antoka fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny maha mendrika ianao. Ho fanampin'izay, Manaiky ianao hanaiky ny fanapahan-kevitry ny Oniversiten'i Hodges ho farany ary mifamatotra satria mifandraika amin'ny atin'ny fifaninanana ity.
Vanim-potoanan'ny fifaninanana: Horaisina ny fisoratana anarana manomboka ny talata 15 septambra 2020 amin'ny 7:00 maraina EST ary mifarana ny Alarobia 30 septambra amin'ny 11:59 alina EST. Ny fandraisana anjara rehetra dia tsy maintsy raisina amin'ny alarobia 30 septambra 2020 amin'ny 11:59 alina EST amin'ny alàlan'ny mailaka mankany: Marketing@hodges.edu.
Ahoana no hiditra: Ny fidirana dia tsy maintsy mameno ny fepetra takiana amin'ny fifaninanana, araka ny voafaritra, mba hahafahany mahazo loka. Ireo fidirana tsy feno na tsy manaraka ny lalàna na ny fepetra arahana dia azo esorina amin'ny fahefan'ny Hodges University irery. Azonao atao ny miditra indray mandeha monja, manome ny anarana heverinao fa tokony hananan'ny Hodges University Hawk. Mety tsy hiditra imbetsaka noho ny voalaza ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana adiresy mailaka, mombamomba na fitaovana marobe amin'ny fiezahana hivily lalana. Raha mampiasa fomba hosoka ianao na manandrana mamily ny lalàna, dia mety hesorina amin'ny alàlan'ny fahefan'ny Hodges University ny fandefasana anao.
loka: Ilay mpandresy amin'ny fifaninanana dia hahazo kilalao plush Hodges Hawk iray. Raha mpiditra marobe no manolotra anarana fandresena mitovy, dia mpandresy iray no ho voafantina tampoka. Tsy azo zahana ny loka. Ny fandaniam-bola rehetra mifandraika amin'ny loka, anisan'izany ny tsy ferana ary ny hetra federaly, fanjakana ary / na eo an-toerana dia anjaran'ny mpandresy ihany. Tsy avela hosoloina ny loka na ny famindrana / fanolorana loka ho an'ny hafa na ny fangatahana ny vola mitovy amin'ny Mpandresy dia avela. Ny fanekena loka dia fahazoan-dàlana ho an'ny Oniversiten'i Hodges hampiasa ny anaran'i Winner, ny endriny ary ny fidirany ho an'ny tanjona dokam-barotra sy varotra raha tsy misy fanonerana hafa, raha tsy voararan'ny lalàna. Ny Anjerimanontolon'i Hodges, amin'ny fahaizany manokana, dia afaka manome kilalao plastika Hodges Hawk mihoatra ny iray ho an'ireo miditra.
mifanohitra: Miankina amin'ny isan'ny fidirana azo ekena ny elanelan'ny fandresena.
Fisafidianana sy fampandrenesana mpandresy: Ny mpandresy dia hosafidian'ny Filan-kevi-pitantanana ao amin'ny Oniversite Hodges. Ny mpandresy dia hampandrenesina amin'ny alàlan'ny mailaka ao anatin'ny roa andro aorian'ny fisafidianana mpandresy. Ny oniversite Hodges dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tsy fahombiazan'i Winner noho ny spam, mailaka junk na sehatra fiarovana hafa na ho an'ny fandresen'i Winner fampahalalana momba ny fifandraisana diso na tsia. Raha tsy azo ifandraisana ny mpandresy, tsy azo ekena, tsy mitaky ny loka ao anatin'ny fito andro fiasana hatramin'ny nandefasana ny fampandrenesana loka, na tsy nahavita namerina fanambarana sy famoahana efa vita sy notanterahina araka ny takiana, ny loka dia azo esorina ary mpandresy iray hafa. voafantina. Ny fahazoana ny mpandresy ny loka natolotra amin'ity fifaninanana ity dia miankina amin'ny fanarahana ny lalàna sy lalàna federaly, fanjakana, ary eo an-toerana. Izay fanodikodinam-dalàna itondrana WINNER (AT HODGES UNIVERSITY's DISCRETION tokana) dia hisy vokany amin'ny famoahan-kevitr'i WINNER ho mpandresy amin'ny fifaninanana, ary ireo mpiadidy rehetra ho mpandresy dia ho tapitra tampoka.
Zo omenao: Rehefa miditra amin'ity fifaninanana ity ianao dia misolo tena sy manome antoka fa ny asanao dia asan'ny mpanoratra iray tany am-boalohany ary tsy manitsakitsaka ny zon'ny tompona na ny fananana ara-tsaina. Raha manitsakitsaka ny zon'ny fananana ara-tsaina ananan'ny hafa ny fidiranao dia ho afa-miala amin'ny fahalalahana tokana ataon'ny Oniversite Hodges ianao. Raha toa ny atin'ny fidiranao dia voalaza fa fanitsakitsahana ny zon'ny tompona na ny fananana ara-tsaina na iza na iza amin'ny antoko fahatelo, dia hiaro na handamina izany fitakiana izany ianao amin'ny volanao manokana. Hanonitra sy hiaro ary hihazona ny oniversiten'i Hodges tsy maninona ianao na amin'ny raharaham-pitsarana na raharaham-pitsarana, raharaha, fitakiana, tompon'andraikitra, fatiantoka, fahasimbana, vidiny na fandaniana, izay azon'ny Oniversiten'i Hodges iharan'ny, fijaliana, na takiana aminao handoa vola noho ny fandikan-dalàna na ahiahina ho fanitsakitsahana ny zon'ny antoko fahatelo.
Terms & Conditions: Ny Anjerimanontolon'i Hodges dia manana ny zony, amin'ny fahefany irery, hanafoana, hamarana, hanovana na hampiato ny fifaninanana raha toa ka misy virus, bug, fidirana an-tsehatra ataon'ny olona tsy nahazo alàlana, hosoka, na antony hafa ankoatry ny fanaraha-mason'ny Hodges University manimba na misy akony amin'ny fitantananana, filaminana, fahamarinana, na fitondran-tena mety amin'ny fifaninanana. Amin'ny tranga toy izany, ny Hodges University dia afaka misafidy ny mpandresy amin'ny fidirana an-tsokosoko rehetra voaray alohan'ny sy / na aorian'izany (raha mety) ny hetsika nataon'ny Hodges University. Hodges University dia manana ny zony, amin'ny fahefany irery, hanafoanana ny olona manelingelina na manandrana manelingelina ny fizotran'ny fidirana na ny fizotran'ny fifaninanana na tranokala na manitsakitsaka ireo fepetra sy fepetra ireo. Hodges University dia manana ny zony, amin'ny fahaizany manokana, hitazona ny fahamendrehan'ny fifaninanana, hanafoanana ny vato na inona na inona antony, ao anatin'izany, fa tsy ferana amin'ny: firaketana marobe avy amin'ilay mpampiasa iray ihany avy amin'ny adiresy IP samy hafa; firaketana marobe avy amin'ny solosaina iray ihany mihoatra ny avelan'ny fitsipiky ny fifaninanana; na ny fampiasana bot, makro, script, na fitaovana teknika hafa hidirana. Ny fanandramana ataon'ny mpandray anjara fanahy iniana hanimba tranokala na hanimba ny fiasan'ny fifaninanana ara-dalàna dia mety ho fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny heloka bevava sy ny sivily. Raha toa ka misy izany fanandramana izany dia manana zona mitady onitra araka izay faraidin'ny lalàna ny Hodges University.
Mahasakana ny andraikitra: Amin'ny alàlan'ny fidirana, Manaiky ianao hanafaka sy hihazona ny tsy miankina amin'ny University Hodges sy ireo mpiara-miasa aminy, ny maso ivoho, ny maso ivoho ary ny fampiroboroboana, ny mpiara-miombon'antoka, ny solontena, ny solontena, ny solontena, ny manendry, ny mpiasa, ny manamboninahitra ary ny talen'ny asa, na aretina, na maratra, na maty, fahaverezana, fitsarana, fitakiana, na fahasimbana mety hitranga, na mivantana na ankolaka, na vokatry ny tsy fitandremana na tsia, avy amin'ny: (i) fandraisan'anjaran'ny mpandray anjara amin'ny fifaninanana sy / na ny fanekeny, fananany, fampiasana azy, na fanararaotany diso loka na ampahany aminy; (ii) tsy fahombiazana ara-teknika na inona na inona karazana, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny tsy fetezan'ny solosaina, tariby, tambajotra, fitaovana, na rindrambaiko na fitaovana mekanika hafa; iii) ny tsy fahazoana na ny tsy fahazoana miditra amin'ny fampitana, telefaona na serivisy amin'ny Internet; (iv) fidirana an-tsehatra ataon'ny olona tsy nahazo alalana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fizotry ny fidirana na ny Fisondrotana; (v) lesoka elektronika na olombelona amin'ny fitantanana ny Fampiroboroboana na ny fikirakirana ny fidirana.
disadisa: Ity fifaninanana ity dia tarihin'ny lalàn'i Etazonia sy [ny fanjakanao / faritaninao], TSY MISY fanajana ny fifanolanana amin'ny làlana mifehy ny lalàna. Amin'ny maha-fepetra ny fandraisana anjara amin'ity fifaninanana ity, ny mpandray anjara dia manaiky fa izay ady rehetra tsy azo alamina na eo anelanelan'ny roa tonta, na ny antony nahatonga ny hetsika na nifandray tamin'ity fifaninanana ity, dia samy ho voavaha tsirairay avy, tsy misy endrika hetsika na kilasy. , manoloana ny fitsarana any amin'ny [fanjakanao / faritany] misy fahefana anao. Ankoatr'izay, amin'ny fifanolanana rehetra toy izany, dia tsy avela handray mari-pankasitrahana ny mpandray anjara ary amin'izany dia avelany ny zon'antoka, ny sazy, ny sampona na ny vokatr'izany, ao anatin'izany ny saram-pandraharahana ara-dalàna, ankoatry ny fandaniam-bolan'ny mpandray anjara ( izany hoe ny vidiny mifandraika amin'ny fidirana amin'ity fifaninanana ity). Ny mpandray anjara dia manilika ny zon'olombelona rehetra hanana fahasimbana mihamaro na mihabe.
politika fiarovana fiainan'olona: Ny fampahalalana natolotra miaraka amina fidirana dia miankina amin'ny Politika tsiambaratelo voalaza ao amin'ny tranonkalan'ny Hodges University. Mamaky ny politika momba ny tsiambaratelo, kitiho eto.
Lisitry ny mpandresy: Mba hahazoana kopian'ny anaran'ny Mpandresy na kopian'ireto Fitsipika Ofisialy ireto, alefaso ny fangatahanao miaraka amina valopy misy adiresy voatondraka any amin'ny: Hodges University Marketing Department, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. Ny fangatahana dia tsy maintsy raisina alohan'ny 23 Oktobra 2020.
Mpanohana: Ny Mpanohana ny fifaninanana dia ny Hodges University Marketing Department, 2647 Professional Circle, Naples, FL 34119 USA.